2019 कसरी6चरणहरूमा टेस्टोस्टेरोन एनाथेट होमब्रिज बनाउने
/ब्लग/ग्यालरी/2019 कसरी6चरणहरूमा टेस्टोस्टेरोन एनाथेट होमब्रिज बनाउने
प्रकाशित 05 / 07 / 2019 by Dr. Patrick Young मा लेखियो ग्यालरी.
टेस्टोस्टेरोन एन्थथेट पाउडरको बारेमा सबै कुरा
1। टेस्टोस्टेरोन एन्थेटेट के हो
2। टेस्टोस्टेरोन एनाथेटले तपाईंको शरीरलाई के गर्छ?
3। कसरी टेस्टोस्टेरोन एन्यान्टेट होमबुड चरणको चरणमा बनाउने
4। टेस्टोस्टेरोन एन्यान्टेट होमबाउ कदम चरण द्वारा
5। टेस्टोस्टेरोन बाट आफ्नो स्टेरियोड्स होमबाउ सुरू गर्नुहोस्
यो लेखले तपाईं कसरी टेस्टोस्टेरोन एन्टोथेट होमब्रिज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विस्तृत व्याख्या दिन्छ। यसले टेस्टोस्टेरोन एनाथेट फाइदाहरूमा पनि प्रबुद्ध गर्दछ।
टी के छएस्टोस्टेरोन एन्थनेट
कटाई बिरुवाको बिरुवाको बढ्दो लोकप्रियता संग, मानिसहरु सधै केहि चीजको खोजीमा छन् जुन उनीहरुले अरु भन्दा अधिक लाभ प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्दछन्। यस्तो पूरक को एक उदाहरण टेस्टोस्टेरोन एनाथेट हो कि सबै भन्दा प्रयोगी टेस्टोस्टेरोन स्टेरियोड्स हो। यो एक एन्ड्रोजन दुवै हो Anabolic स्टेरॉयडs.
यद्यपि यो प्रयोगको लागि प्रतिबन्धित गरिएको छ, यो बिरोधकर्ताहरु द्वारा स्टेरॉइड को लागि सबै भन्दा अधिक को खोज मा जारी रहयो। न केवल यो बडी बहादुरीहरु को लागि फायदेमंद हो तर यो पनि मेडिकल रूप देखि टेस्टोस्टेरोन प्रतिस्थापन थेरेपी मा उपयोगी छ, लिंग लिंग पुनर्गठन र हाइपोगोनदवाद को उपचार को लागि उनका लागि।
टेस्टोस्टेरोन एनाथेटले तपाईंको शरीरलाई के गर्छ?
टेस्टोस्टेरोन एनाथेटले ऊतक मरम्मतमा मद्दत पुर्याएको छ जसले छिटो शरीर पुन: प्राप्तिमा उत्पन्न गर्दछ। प्रोटीन को उत्पादन बढाएर, ऊतक ऊतक को मदद गर्दछ जसमा जिम मा धेरै कठिन काम गरिरहेको छ। नतिजाको रूपमा, तपाईं कठिन काम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको कामको नतीजा बाहिर हेर्न सक्नुहुन्छ।
शरीरको मोटोमा कमी
जबकि धेरै मान्छे महसुस गर्न सक्छन् जस्तो महसुस हुन सक्छ, धेरै खाई छैन र शरीर को मोटाइ हराउन उनि हराउन चाहँदैनन्, टेस्टोस्टेरोन Enanthate यसलाई प्रभावकारी बनाउन सिद्ध छ। अचम्मलाग्दो कुरा भनेको हो कि यदि तपाईं बिल्डर बिल्डर हुनुहुन्छ भने, तपाइँ आफ्नो मांसपेशी गुमाउनु हुँदैन तर उनीहरूलाई छुट्याउन नसक्ने फाइदा।
के यो अर्थ हो कि तपाईं आफ्नो मांसपेशियों को बनाए राखन को लागि प्राप्त गर्छन, र बेहतर पनि उनि अधिक परिभाषित हुन्छ। कम शरीरको मोटोले तपाईंलाई आकारमा रहन र लामो जीवन बिताउनेछ।
मांसपेशियों मा वृद्धि को बढाया
यदि तपाईं मांसपेशिहरु निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईले यो तथ्यलाई सराहना गर्नेछन् कि टेस्टोस्टेरोन एनाथेट हुन्छ शरीर सौष्ठव प्रभाव सही छ। यसले हड्डी मज्जामा रातो रक्त सेल उत्पादन बढाएर एक बल्क माथि मद्दत गर्दछ। टेस्टोस्टेरोन एनाथेटले पनि कोर्टिसोलोल प्रभावलाई अवरुद्ध गर्दछ, एक हार्मोन जसले मांसपेशीलाई catabolizing द्वारा यसको काम गर्दछ।
ठूलो भार उठाउन, तपाईंले बढी शक्ति प्राप्त गर्नु पर्छ। एक कारण धेरै बडिबुल्डरहरूले आफ्नो बल को विकास गर्न केहि गर्नेछ किनभने यो मांसपेशियों मा पर्याप्त लाभ संग सम्बन्धित छ। टेस्टोस्टेरोन एनाथेट एक उत्कृष्ट स्टेरॉइड मध्ये एक हो जसले तपाईलाई सँधै वजनका साथ लिने क्षमतालाई अझ बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ।
कसरी टेस्टोस्टेरोन एन्यान्टेट होमबुड चरणको चरणमा बनाउने
आफ्नै आफ्नै बनाउनु घरबेच टेस्टोस्टेरोन एन्यान्टिएट या त सजिलो हुन सक्छ या जटिल, जस तरिकाले तपाई रोज्नु हुन्छ। धेरै व्यक्तिले तपाईंलाई यो धेरै विज्ञान संग हतोत्साहित गर्न सक्छ, तर हामी यसलाई अझ सरल रुपमा प्रस्तुत गर्नेछौं। यहाँका आवश्यकताहरू छन् र कसरी टेस्टोस्टेरोन एन्यान्टिएट ब्रिज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चरणमा एक चरण;
टेस्टोस्टेरोन एनाथेट पाउडर: 62.5 ग्राम
टेस्टोस्टेरोन एन्यान्टिएट: 250mg प्रति एमएल
बेन्जिल शराब (बीए): 5ml (2%)
बेंजिल बेंजोजेट (बीबी): 50 मिलीलीटर (20ml)
अंगूर तेल: 148.13ml
10 मिलीलीटरमा दस सेट हुने सेल्सहरू (सम्पूर्ण सेटमा एक टोपी, रबड बन्दरगाह, र क्याल समावेश हुनुपर्छ।)
22um सिरिंज फिल्टर
20mL / 60 मिलीलीटर सिरिंज जसमा एक 18-21 गेज सुई छ।
3mL सिरिंज एक 18-21 गेज सुई संग
एक फ्राइङ प्यान
ग्लास रड र 100mL बेकर
कागजको धेरै सानो टुक्रा
डिजिटल आयाम (+ -0.1 वा 0.01)
टेस्टोस्टेरोन एन्यान्टेट होमबाउ कदम चरण द्वारा
चरण 1: टेस्टोस्टेरोन एनाथेट पाउडर वजन।
चरण 2: बीकरमा पाउडर, बीए, र बीबी जोड्नुहोस्
चरण 3: बीजर को पानी को स्नान मा गरम करें
चरण 4: अंगूर तेल थप गर्नुहोस्
चरण 5: फिल्टर गर्दै
चरण 6: फ्लिप बन्द क्यापहरूको साथ तिनीहरूलाई दमन गर्नुहोस्
यहाँ यो कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारे विस्तृत चरणहरू छन्;
चरण 1: टेस्टोस्टेरोन एनाथेट पाउडर वजन
वजन टेस्टोस्टेरोन एनाथेट पाउडर यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि तपाईं आफ्नो होमबाउ बनाउन को लागी सटीक मात्रा को उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ। सटीक वजन प्राप्त गर्न, कागजको सानो टुक्रा पाउनुहोस् र मापनमा राख्नुहोस्।
पाउडर वजन गर्दा पेपरको वजन समावेश गर्न निश्चित गर्न, शून्यमा स्केल सेट गर्न दुर्लभ थिच्नुहोस्। अब तपाईले पाउडर बिस्तारै थप्न सक्नु भन्दा टाढा राख्न सक्नुहुनेछ कि तपाई हटाउनको लागि आवश्यक हुन सक्दछ।
कहिलेकाँही पाउडर यति सानो वजनमा हुन सक्छ जुन तपाईले केहि थप गर्न आवश्यक हुन्छ जब तपाईलाई पुन: सेट गर्न आवश्यक पर्दछ। यसलाई ह्याक गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका एक सानो पाउडर थप्नु हो र आफ्नो औँला प्रयोग गरेर माप मा थिच्नुहोस् र नम्बर फिर्ता गर्न तल अनुमति दिनुहोस्। एकपटक तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाईंले आफ्नो 25 ग्राम सही रूपमा वजन गर्नुभयो, तपाई अहिले राम्रो हुनुहुन्छ। टेस्टोस्टेरोन एन्थेट पाउडर वजन सुनिश्चित गर्न को लागी कि तपाइँ आफ्नो होमबाउ बनाउन आवश्यक सटीक मात्रा को प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
बीकरमा सुकेको पाउडर राख्नुहोस्।
बेंजिल रक्सी को 2ml र 2ml बेंजिल बेंजोजेट जोडें।
बेन्जिल रक्सी थप्न को लागी प्राथमिक प्रकार्य एक स्टेरलिजिङ एजेन्ट को रूपमा कार्य गर्न को लागी छ। यो सबै तेल र पाउडर एकै ठाउँमा राखे पछि विलायकको रूपमा पनि काम गर्दछ। बेंजिल रक्सी पनि एक व्यापक रूप देखि प्रयोग विलायक छ, र यो लाभ संग आउछ कि यो एक painless इंजेक्शन हुन मा एड्स।
यो चरण वैकल्पिक छ, तर यदि तपाईं प्रक्रियालाई सुचारु रूपमा चलाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले यसलाई छोड्नु हुँदैन। एक बत्ती पाउनुहोस् र यसलाई एक इन्च पानीको साथ भर्नुहोस्। गर्मी को एक स्रोत मा राख्नुहोस्, उदाहरण को लागि, स्टोव र यो गरौं।
प्यान लिनुहोस् र बेकरलाई यसमा राख्नुहोस्। पानीको केहि सेन्टिमिटरमा घुमाउनुहोस्। पाउडरमा आँखा राख्नुहोस् र यो घडी को रूप मा घनिष्ठ नभएसम्म यो स्पष्ट नभएसम्म बन्द हुन्छ। एक स्पष्ट समाधान भनेको यो मिश्रण अब पिघ्यो।
यो सबै पाउडर को पूरी तरिका देखि बचाव मा भंग गर्न को लागि योगदान गर्दछ। जब अर्को पाउडर देखिनेछ अर्को चरणमा सार्नुहोस्।
कोणिकाको लागि पर्खनुहोस् तँ ठुलो ठोक्नुहोस् त्यसपछि अँध्यारो तेलमा यसमा थप्नुहोस्। त्यसपछि तपाइँलाई फिल्टर गर्न सजिलो बनाउन यसलाई सानो तलको गर्न सक्नुहुन्छ।
अंगूरको बीउ तेल सबै अन्य तेलको मासु हो जसले क्यारियरको रूपमा काम गर्दछ। अरूले भन्दा यसको प्रयोगको लागि यसलाई अझ राम्रो बनाउँछ कि यो पतला छ र एनालिटिकल गुण छ। साथै, यो क्षतिग्रस्त ऊतक को मरम्मत र यो सबै को लागि स्वस्थ हो योगी गर्न मद्दत गर्दछ! तपाईं अंगूरको बिरुवाको तेलको कारण एलर्जी प्रतिक्रियाबाट ग्रस्त हुने सम्भव छैन।
तपाईंले अर्को कदम चाल्नु पर्छ यो समाधान सिरिजमा समाधान गर्न को लागी छ जुन तपाइँ फिल्टर गर्न प्रयोग गर्नुहुनेछ। तपाईंले एक ठूलो सिरिंज वा सानो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र प्रक्रिया धेरै चोटि दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ।
0.22um सिरिगे फिल्टर यसको प्याकेजबाट अनपैप गर्नुहोस् त्यसपछि सानो छेउमा हरियो सुई ठीक गर्नुहोस् र सिरिन्जमा लाग्नुहोस्। एक अल्कोहल स्वाब प्रयोग गरेर, बाँझ वाल को माथि पकाउनुहोस् र यसमा हरियो सुई सम्मिलित गर्नुहोस्। सुईलाई सिरिज फिल्टरसँग जोडिएको साईसनमा राख्नुहोस्।
यो कदम एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदम हो, र सबै समाप्त स्टिरोइडहरू यसको माध्यम ले जान्छ। यो सामान्य हो कि फिल्टर निस्पंदन प्रक्रियाको समयमा अवरुद्ध हुन सक्छ। नतिजाको रूपमा, तपाईंलाई ध्यान दिनेछ कि प्रक्रिया ढिलो हुन्छ। यो काउन्टर गर्न, फिल्टरलाई नयाँमार्फत बदल्नुहोस् तपाईंलाई प्रतीक्षा गर्नको लागी दुखाइ सुरक्षित गर्न।
तथापि, तपाईंलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ कि एक समाधान फिल्टर गर्न समय स्ट्रिइड मा निर्भर गर्दछ साथै उत्पादन को मिलीग्राम / मिलीलीटर।
एकपटक तपाईंले स्टाइलि भियलमा फिल्टर गरेपछि प्रक्रिया पूरा भयो।
फ्लिप-अफ क्याप्स प्रयोग गरेर तपाइँको समाधान सील गर्नुहोस्।
टेस्टोस्टेरोन बाट आफ्नो स्टेरियोड्स होमबाउ सुरू गर्नुहोस्
टेस्टोस्टेरोन homebrew स्टेरॉयड उत्तम हो कि तपाईं संग सुरु गर्न सक्नुहुनेछ किनभने तपाईंको शरीर यसको परिचित छ। यो स्वाभाविक रूपमा शरीरमा उत्पादन गरिएको छ र यसले बढ्न, मरम्मत र प्रगति गर्न मद्दत गर्छ।
जब टेस्टोस्टेरोन स्तर कम छ, त्यहाँ वसा र वजन बढेको छ। टेस्टोस्टेरोन पूरक हो कि तपाईंले एथलेटिक प्रदर्शन, राम्रो सहनशीलता, र बलियो मांसपेशिहरु प्राप्त गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो। यदि तपाईं आफ्नो शरीर को पुनर्जीवित करने को योजना बना रहे हो, तो तपाईंले टेस्टोस्टेरोन को उपयोग गरेर आफ्नो होमब्रिड स्टेरॉयड बनाउन मा विचार गर्नु पर्छ।
तपाईंको घरब्रिड स्टेरॉइड बनाउनको साथमा मुद्दा यो हो कि तपाईले विश्वास गर्नुभएन कि यसले तपाइँलाई योग्य परिणाम प्रदान गर्नेछ। दायाँ नुस्खा पछि पछ्याउँदा, तपाईंले पाउनुहुनेछ कि तपाईंले गर्नुभएको उत्पादनको बारेमा धेरै विश्वस्त छैन। धेरै व्यक्ति जो आफ्नो स्टेरॉयडहरू उत्पादन गर्छन् परीक्षण र त्रुटि विधिको रूपमा प्रयोग गर्छन्।
यदि तपाइँसँग पर्याप्त प्रयोगशाला योग्यहरू छैन भने, तपाईंले कहिल्यै यो प्रक्रियामा संलग्न हुनुहुँदैन किनभने यो तपाईंको लागि खतरनाक हुन सक्छ। लेखमा देखेर तपाईंले मात्र आधारभूत प्रयोगशालाको उपकरण चाहिन्छ तर छोटो कदम भेट्टाउन सक्नुहुनेछ मुख्यतया तपाईं इन्जेक्शन प्रक्रियाबाट मुख्य समस्याहरू प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। यही कारणले गर्दा गृहब्रिज स्टेरॉयडको लागि तयार पार्नु पहिले इंजेक्शन गर्नु भन्दा धेरै बाँझ हुनुपर्छ। यसको अर्थ तयार छ कि तपाईं तयारीको बेला धेरै सावधान रहनु पर्छ। धेरै उत्सुक आँखा भएको छैन तपाईंले पढ्न सक्नुहुने केहि चीजहरू सिर्जना गर्दा आफैलाई चोट पुर्याउन सक्दछन्।
विश्वस्त टेस्टोस्टेरोन एन्यान्टेट डोजर र गुणस्तर लिइरहनुभएको छ भन्ने विश्वास गर्न तपाईंले पहिले नै उत्पादन गरिएको स्टेरॉइडमा लगानी गर्न विचार गर्नुपर्दछ। यो तपाईंको लागि सुरक्षित मात्र हुनेछ तर प्रयोग गर्न अझ सहज छ।
तपाईंको गृहब्राव स्टेरियोड्सहरू उत्पादन गर्न फायदेमंद छ किनकी यसले जिबमा आफ्नो आदर्श लाभ प्राप्त गर्न एड्स बिना तपाईंलाई जेबमा गहिरो खुवाउन मद्दत गर्दछ। यसले कम गुणस्तर स्टेरियोड्सहरूको लागि राम्रो विकल्प प्रस्ताव गर्न सक्छ जुन बजारमा रोगुल आपूर्तिकर्ताहरू प्रदान गर्दछ। माथि प्रदान गरिएको सर्वोत्तम टेस्टोस्टेरोन होमब्रिड नुस्खाको साथ, तपाईं उच्च गुणवत्ताको उत्पादन उत्पादन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
Anabolic स्टेरॉयड र तिनीहरूलाई बनाउन, प्रोफेसर फ्रैंक, पृष्ठ 1-42
टेस्टोस्टेरोन: एक्शन-डेफिनिटी-इन्स्स्टीट्यूट, ईबेर्र्ड नजसेच्लाग, हर्मन एम बहर, पृष्ठ 330-339
TTFB; टेस्टोस्टेरोन, कुल, जैव, नि: शुल्क, एस सेप्टेम्बर 19, 2017
सबैभन्दा शक्तिशाली स्टेरॉइड मिबिओलोरोन (चेक ड्रपहरू) अनलाइन
DECA पाउडर - परम गाइड कसरी गर्ने Nandrolone Decanoate (Durabolin)
12 चरणहरूमा स्टेरियोड्स पाउडर आपूर्तिकर्ता कसरी छनौट गर्ने? Trenbolone Enanthate पाउडर 2019 मिश्रण गर्न Trenbololone Recipe कसरी प्रयोग गर्ने
हाइड्रोलिकेज एचसीएल पाउडर